INkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo ngoshwele kwelikaSenwedi - Bayede News
INkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo ngoshwele kwelikaSenwedi
Isithombe: ngiDelwyn Verasamy/M&G
Mhla zingama-21 kuNhlaba wezi-2021 ecaleni likaSenwedi v The State  ZACC 12, iNkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo esicelweni sokuphikisa isinqumo seNkantolo Enkulu yaseNorthern Cape esigabeni saseKimberley esithinta isicelo sikashwele.
INkantolo Enkulu yagweba abasolwa uMnu uGaolatlhe Senwedi noMnu u-Alfred Khonyane ngokubulala uMnu uCoetzee udilikajele neminyaka engama-25 bengakwazi ukufaka isicelo sikwashwele ngecala lokubulala.
Kuleli cala iNkantolo YoMthethosisekelo bekufanele icacise ngokusebenza kwalo myalelo weNkantolo Enkulu kwazise iminyaka eyabe ikade ibekwe umthetho ukukwazi ukufaka isicelo sikashwele yayingama-20.
Mhla zimbili kuMbasa wezi-2001, uCoetzee wadutshulwa wabulawa kubanjwa inkunzi kuhlonyiwe. USenwedi, okunguye ofake isicelo sokuphonsela inselelo isinqumo seNkantolo Enkulu kuleli cala, nowayengumsolwa wesibili uKhonyane bagwetshwa ngecala lokubulala uCoetzee zimbili kuNhlaba wezi-2002 nelokugqekeza indlu, ukuphatha isibhamu nezinhlamvu ngokungemthetho.
Zili-14 kuNhlaba wezi-2002 bagwetshwa udilikajele kwaphinde kwakhishwa umyalelo othi uSenwedi noKhonyane bangadedelwa ngoshwele kuze kube sebeqede okungenani iminyaka engama-25 esigwebeni sabo.
USenwedi wazama ukuphonsela inselelo lesi sigwebo kodwa wangaphumelela. Ngowezi-2017, uSenwedi watshelwa esinye isiboshwa ngesicelo sikashwele ngokweSigaba 17(2)(f) seSuperior Courts Act we-10 wangowezi-2013. Nempela uSenwedi wasifaka isicelo eNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala kodwa watshelwa uRegistrar wenkantolo ukuthi ngeke samukelwe isicelo sakhe kwazise esokuqala sachithwa mhla zingama-26 kuMasingana wezi-2009 ngaphambi kokuba uMthetho (Superior Courts Act) uqale ukusebenza ngoNcwaba wezi-2013.
USenwedi wabe esedlulela eNkantolo YoMthethosisekelo ukulungisa izinsolo zakhe zokunyathelwa kwamalungelo akhe akuMthethosisekelo yiNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala ngokwenqaba ukulalela isicelo sakhe sikashwele.
INkantolo Enkulu yageja umgodi ngokulungisa lesi sikhathi seminyaka engama-25 sokunganikwa ushwele.
Kulokhu, uSenwedi watshela le Nkantolo ukuthi ilungelo lakhe lokuvikelwa ngokulingana ngaphansi komthetho linyatheliwe, kanjalo nelokukwazi ukuya enkantolo, elokuphonsela inselelo, nelokubuyekezwa inkantolo enkulu.
Esethulweni sakhe waphinde wathi ukubekwa kwesikhathi seminyaka engama-25 sokunganikwa ushwele ngaphambi kokuphasiswa kweSigaba 276b soMthetho iCriminal Procedure Act wama-51 we-1977 (CPA) kwakuwukunyathela amalungelo akhe akuMthethosisekelo.
Wathi, empeleni, kwakuwukunyathela ilungelo lakhe lokungaphucwa inkululeko ngaphandle kobulungiswa nelungelo lakhe lokuhlomula esigwebeni esincishisiwe uma ebesikhona esiqondene necala sesaguqulwa phakathi kwesikhathi icala lenzeka nangesikhathi sesigwebo.
Isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo
Le Nkantolo esinqumweni sayo esikhishwe uMehluleli uSteven Majiedt ngokuvumelana noMehluleli Omkhulu uMogoeng Mogoeng, aBehluleli uChris Jafta, uSisi Khampepe, uMbuyiseli Madlanga, uRammaka Mathopo, uNonkosi Mhlantla, uLeona Theron, uZukisa Tshiqi noMargaret Victor, ithe isizathu esinqala sokuphonsela inselelo isinqumo asinakho okubambekayo.
“UMthetho iSuperior Courts Act awunaso isicelo esibuka emuva, ngakho iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala ayenzanga iphutha ngokuchitha isicelo sikashwele sikammangali,” kufundeka isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo.
Kodwa, le Nkantolo imile ekutheni enye ingxenye yesicelo iyezwakala. “ISigaba 276b seCPA sivumela isikhathi seminyaka engama-25 sokunganikwa ushwele kodwa saqala ukusebenza lulunye kuMfumfu wezi-2004 emveni kokuba ummangali wabe eselahlwe yicala futhi wagwetshwa futhi emveni kokuba enze icala,” kufundeka isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo.
Siqhuba sithi, iNkantolo ikubonile ukuthi isikhathi sokunganikwa ushwele sisho isigwebo eseluliwe futhi ngeke kwenziwa kubuyelwe emuva.
Ngalokhu, ngokwesinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo, iNkantolo Enkulu yageja umgodi ngokulungisa lesi sikhathi seminyaka engama-25 sokunganikwa ushwele.
Isinqumo siqhube sathi, ngesikhathi sokugwetshwa kukaSenwedi abantu abadonsa isigwebo sokudilikelwa ijele kwakufanele bahlale ejele okungenani iminyaka engama-20 ngaphambi kokuba sebengakulungela ukuthola ushwele.
Ngaphezulu kwalokhu, iNkantolo YoMthethosisekelo ithe uma inkantolo ifuna ukukhipha umyalelo wesikhathi sokunganikwa ushwele kufanele inike abathintekayo ithuba lokuxoxisana ngalokho.
“INkantolo Enkulu yehluleka ukwenza lokhu okungelinye iphutha elibi kodwa kuba wubuhlakani uma ubheka iphutha lokuqala ukuthi kudinga ukuba kuchithwe ingxenye yomyalelo.”
Ngalokhu iNkantolo YoMthethosisekelo inike uSenwedi ilungelo lokuphonsela inselelo isinqumo seNkantolo Enkulu nokuthi ingxenye yesinqumo sayo mayelana nesikhathi seminyaka engama-25 sokunganikwa ushwele kukammangali ichithwe.
INkantolo YoMthethosisekelo iphinde yayalela uRegistrar weNkantolo ukuba azise owayengumsolwa wesibili uKhonyane, osesimweni esifanayo nesikaSenwedi kodwa ongabanga yingxenye yalesi sicelo, ngalesi sinqumo.
nguSabelo Mbatha May 28, 2021